10 Iyi ndiyo nhoroondo yevanakomana vaNoa,+ Shemu, Hamu naJafeti. Zvino vakatanga kuberekerwa vanakomana pashure pemafashamo.+ 2 Vanakomana vaJafeti vaiva Gomeri+ naMagogi+ naMadhai+ naJavhani+ naTubhari+ naMesheki+ naTirasi.+ 3 Vanakomana vaGomeri vaiva Ashkenazi+ naRifati+ naTogama.+ 4 Vanakomana vaJavhani vaiva Erishaa+ naTashishi,+ Kitimu+ naDhodhanimu.+ 5 Vagari vepazvitsuwa zvemarudzi vakapararira munyika dzavo vachibva kune ivava, vamwe nevamwe maererano norurimi rwavo, maererano nemhuri dzavo, nemarudzi avo. 6 Vanakomana vaHamu vaiva Kushi+ naMizraimu+ naPuti+ naKenani.+ 7 Vanakomana vaKushi vaiva Sebha+ naHavhira naSabta naRaama+ naSabteka. Vanakomana vaRaama vaiva Shebha naDhedhani.+ 8 Kushi akabereka Nimrodhi.+ Ndiye akatanga kuva munhu ane simba panyika. 9 Iye akava muvhimi ane simba airwisana naJehovha. Ndokusaka pane kutaura kwokuti: “SaNimrodhi muvhimi ane simba airwisana naJehovha.”+ 10 Umambo hwake hwakatanga paBhabheri+ neEreki+ neAkadhi neKarine, munyika yeShinari.+ 11 Achibva panyika iyoyo akaenda kuAsiriya+ akatanga kuvaka Ninivhi+ neRehobhoti-Iri neKara 12 neReseni yaiva pakati peNinivhi neKara: iri ndiro guta guru. 13 Mizraimu+ akabereka Rudhimu+ naAnamimu naRehabhimu naNaftuhimu+ 14 naPatrusimu+ naKasruhimu+ (vaFiristiya+ vakabva pane ivava) naKaftorimu.+ 15 Kenani akabereka Sidhoni+ dangwe rake naHeti+ 16 nomuJebhusi+ nomuAmori+ nomuGigashi 17 nomuHivhi+ nomuAki nomuSini 18 nomuAvhadhi+ nomuZemari nomuHamati;+ uye mhuri dzomuKenani wacho dzakazopararira. 19 Naizvozvo muganhu womuKenani wacho wakatangira paSidhoni kusvikira kuGerari,+ pedyo neGaza,+ kusvikira kuSodhoma neGomora+ neAdma+ neZebhoimu,+ pedyo neRasha. 20 Ava ndivo vaiva vanakomana vaHamu maererano nemhuri dzavo, maererano nendimi dzavo, munyika dzavo, maererano nemarudzi avo. 21 Shemu, tateguru vevanakomana vose vaEbheri,+ munun’una waJafeti mukuru pane vose, akaberekerwawo vana. 22 Vanakomana vaShemu vaiva Eramu+ naAsuri+ naApakishadhi+ naRudhi naAramu. 23 Vanakomana vaAramu vaiva Uzi naHaru naGeteri naMashi.+ 24 Apakishadhi akabereka Shera,+ Shera akabereka Ebheri. 25 Ebheri akaberekerwa vanakomana vaviri. Mumwe ainzi Peregi,+ nokuti pamazuva ake nyika yakakamurwa;+ uye munun’una wake ainzi Joktani.+ 26 Joktani akabereka Arumodhadhi naSherefi naHazamavheti naJera+ 27 naHadhoramu naUzari naDhikra+ 28 naObhari naAbhimaeri naShebha+ 29 naOfiri+ naHavhira+ naJobhabhu;+ vose ava vaiva vanakomana vaJoktani. 30 Nzvimbo yavo yavaigara yaibvira paMesha kusvikira kuSefari, nzvimbo ine makomo yokuMabvazuva. 31 Ava ndivo vaiva vanakomana vaShemu maererano nemhuri dzavo, maererano nendimi dzavo, munyika dzavo, maererano nemarudzi avo.+ 32 Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevanakomana vaNoa maererano nemadzinza avo emhuri, maererano nemarudzi avo, uye marudzi akapararira panyika achibva kune ivava, mafashamo apfuura.+